Home » Isekọ akụkọ njem » Holland America Line amaliteghachi njem ụgbọ mmiri nke Gris na August
Holland America Line anatalarị ịmalitegharị ụgbọ mmiri si Piraeus, Athens
Atụmatụ "Idyllic Greek Isles" nwere Kotor, Montenegro, agwaetiti Greek nke Kékira (Corfu), Thíra (Santorini) na Mykonos
"Ihe ebube oge ochie" na-apụ na August 22 iji nyochaa Haifa, Israel, yana Náfplion, Mykonos na Rhodes
“Adriatic Allure” ga-esi Piraeus kwaga Venice, Italytali, kpọọ na Mykonos, Katakolon (Olympia) na Crete (Chania), Gris, na Sarandë, Albania
Na-arụ ọrụ na mmekọrịta chiri anya na gọọmentị nke Gris, Nweta Holland America enwetala nkwado iji malitegharia ịpugharị site na Piraeus (Athens) na Ọgọstụ na njem anọ na-akwụsị Eurodam Ntinye akwụkwọ maka ụgbọ mmiri ndị a ga-emeghe Mee 6.
Mgbe ọpụpụ n’abalị 15 na 29 nke Ọgọst, ụzọ njegharị “Idyllic Greek Isles” nwere atụmatụ Kotor, Montenegro, tinyere agwaetiti Greek nke Kékira (Corfu), Thíra (Santorini) na Mykonos. “Ihe ebube oge ochie” na-apụ na August 22 iji nyochaa Haifa, Israel, yana Náfplion, Mykonos na Rhodes na Gris. Enwere ike ijikọ nhọrọ abụọ ahụ iji mepụta ogologo oge mkpokọta ụbọchị iri anọ na anọ.
“Bọchị asaa nke "Adriatic Allure" nke na-apụ na Septemba 5 ga-esi Piraeus gaa Venice, Italy, na oku na Mykonos, Katakolon (Olympia) na Crete (Chania), Gris, na Sarandë, Albania. A ga-ekwuputa ụgbọ mmiri ndị ọzọ dị na Mediterenian n'ime ụgbọ mmiri Eurodam na izu ndị na-abịanụ ma tinye ọdụ ụgbọ mmiri na Italytali na Gris. Eurodam laghachiri na United States ịmalite njem ụgbọ mmiri Caribbean bipụtara na etiti ọnwa Nọvemba.
"Onye ọ bụla nọ na Holland America Line na-akwadebe maka ịlaghachi ọrụ, anyị nwekwara ekele na gọọmentị nke Gris maka inye anyị ohere igosi na anyị nwere ike ịrụ ọrụ ụgbọ mmiri anyị n'enweghị nsogbu," Gus Antorcha, onye isi ala nke Gọọmenti kwuru Nweta Holland America. "Agwaetiti ndị mara mma nke Gris abụrụla ihe dị mkpa na njem ụgbọ mmiri anyị na Mediterranean ruo ọtụtụ iri afọ, a na-asọpụrụ anyị inwe ike ịmaliteghachi Atens ma nye ndị ọbịa anyị ezumike ezumike kwesịrị ncheta mgbe oge a niile na-enweghị njem njem."
"The Greek Islands na-anabata ụgbọ mmiri Holland America Line maka ọtụtụ afọ, anyị nwekwara obi ụtọ ịrụkọ ọrụ ọnụ ịnabata usoro ụgbọ mmiri azụ n'oge ọkọchị a," ka Harry Theoharis, Mịnịsta nke njem nleta nke Gris kwuru. "Anyị ji n'aka na ndị ọbịa niile na Gris ga-enwetakwa ahụmịhe pụrụ iche na ebe anyị mara mma ma nwee ọ enjoyụ zuru oke na akụkọ ntolite, ọdịbendị na gastronomy nke mba anyị."